Deg deg:Ilkacase oo sir culus bannaanka keenay kadib dagaalkii Naciimo jokar. - xog baahiye
Ilo xog ogaal ah ayaa inoo sheegay, in Ilkacase iyo xaaskiisa Naciimo jokar ay ayaantan si aad ah isugu dhacsan yihiin.khilaafka soo kala dhex galay lamaanahan ayaa la aaminsan yahay inuu gacan weyn ka geystay Dahir calasow oo horraan u ahaa cadowga koowaad ee Naciimo jokar.
Dahir calasow ayaa goor dhowayd ku shaaciyay bartiisa Facebook in lammaanihii dhowaan is calmaday uu xaalkoodu meel xun marayo.waxa uu intaasi ku daray in y u badan tahay in khilaafka soo kala dhex galay awgii ay kala tagaan.
AKHRISO: Deg deg:Shaadiyo sharaf oo markale baalasha ka riftay Najmo Nashaad iyo Sharma boy.
Dhanka kale Nimco jokar oo horay u ahayd xaaskii hore ee Feysal xawaase, ayaa goor sii horreysay barteeda instagram soo gelisay muuqaal ay seygeeda waqti la qaadaneysa.lama hubo khilaafka uu Dahir ka dhawaajiyay balse waxaa soo baxaya in Ilkacase uu si hoose u mehersaday gabadh kale isla markaana laga yaabo in uu iska fasaxo Naciimo jokar.
Ilkacase ayaa u muuqda mid qorsheynaya furriinka Naciimo jokar balse waxaa la ogaaday in uu doonayo in uu arrinkani si hoose u xalliyo maadaama ay tahay arrin qoyskiisa quseeysa.